Eritrereto hoe nipetraka mba hankafy ny maraina kafe anatin'ny maritrano italianina nentim-paharazana Raha nijery amin'ny manga mamirapiratra rano sy luscious tendrombohitra maitso. Na dia mety ho toa toy ny nofy fotsiny, dia tena zava-misy ho an 'ireo izay mitsidika ny mahavariana Lake Como. izany mahatalanjona toerana mipetraka eo amin'ny faniriana lisitry ny mpandeha maro. Efa nanao ny lalana mihitsy aza ny vola teo lamba miaraka amin'ny Hollywood Hits sy ny horonan-tsary vahiny! Lake Como mifototra amin 'ny zorony avaratrandrefan'i Italia, tsara akaikin'ny Nanketo Alpes eto Soisa. Amin'ny morontsirak'ity fahagagana voajanahary mahafinaritra dia tanàna maro izay azo antoka fa talanjona. Na izany aza, izay maka ny fitsidihana ireo dia mety ho sarotra raha mafy amin'ny fandaharam-potoana. Raha ara-potoana fohy, ary te-hanao indrindra avy amin'ny diany, eto dia 5 tanàna tsara tarehy ny fitsidihana amin'ny Lake Como.
Raha mpizaha tany sasany mihevitra Como ny mpizaha tany fandrika, Matetika izy ireo tany am-boalohany ho tonian'ny hatsaran-tarehy io tanàna fahiny. Azonao atao ny mandany herinandro iray manontolo trandrahana Como ary mbola mahita zavatra ho matahora. Raha ny tena izy, maro ny mpizaha tany izay raiki-pitia amin'ny tanàna maka ny fotoana mandeha mamaky ny tanàna. Tsy mety ho be dia be trano fisotroana kafe sy trano fisakafoanana mikendry ny firohotry ny mpizaha tany. Na izany aza, misy ihany koa harena miafina. Toerana toy ny Silk Museum, ny 15tamin'ny taonjato faha-katedraly, ny Porta Pretoria ary ny Moyen Âge foibe sahisahy kokoa miandry ny fanahy.
Ary amin'ny atsinanana amoron'ny farihin'i Como lainga Varenna. Na dia mety tsy mampitaha ny habeny ny tanàna lehibe kokoa, dia mbola tsy maintsy fitsidihana toerana. Amin'io fanjonoana nentim-paharazana Italiana tanàna dia tsy maintsy mahita ny olona izay te-hiala amin'ny hustle sy ny tanàn-dehibe feno olona misomebiseby fiainana. Time toa mijanona rehefa mipetraka eo amin'ny seranan-tsambon'i ary mibanjina ny manga rano sy manomba tendrombohitra. Rehefa mandray ny zava-drehetra ao, mandeha manodidina mba hiaina ny cobbled lalankely, tsara tarehy fiangonana, sy mahatalanjona raitra ny Varenna. Ataovy azo antoka ny marika Villa Monastero amin'ny zavatra hita hahita. Tsy foana misokatra ho an'ny besinimaro, fa raha tsara vintana, ho hitanao ny endrika italianina nentin-drazana italiana sy ny atitany ao amin'ny villa. Makà mandeha mamaky ny lava mahia sy zaridaina feno zavamaniry hafakely raha jerenao teo am-farihy.
Ary amin'ny andrefana amoron'ny Lake Como, ianao dia afaka mitsidika ny tanàna tsara tarehy ny Menaggio. Menaggio dia tanàna lehibe kokoa izay manintona ny maro noho ny fomba fijeriny sy manaitra trano tsara tarehy. Ny fifangaroan'ny ny manodidina tsara tarehy voajanahary blends amin'ny nentin-drazana tanàna Italiana. Ny tanàna dia manana be dia be ny trano izay daty miverina any amin'ny taonjato faha-19. Ny Piazza Garibaldi dia indrindra ny foibe toerana fanangonana ho an'ny mponina sy ny mpizaha tany rehetra,. Misy plethora ny trano fisotroana kafe sy trano fisakafoanana izay hampiely amin'ny fientanentanana sy ny fiainana. Menaggio ihany koa ny fitsidihana ny tantara tsy maintsy tia. Ny tanàna Nandray anjara toerana lehibe ao amin'ny Voalohany sy Faharoa World Ady. Amin'izao fotoana izao, misy fitsidihana maro izay afaka hitondra anareo ho any amin'ny lehibe hitan'ny manodidina ao amin'ny faritra.
Raha te-hiaina Lake Como miaraka amin'ny rehetra ny rendrarendra sy ny esthetics ny Grand Hotel, dia hitsidika Tremezzo. Tremezzo dia tanàna izay nanaiky ny lazan'ny ny farihy, ary dia nanapa-kevitra ny hamorona ny tsy manam-paharoa sy ny mirentirenty traikefa ho an'ny mpitsidika. Na dia eo aza ny famadihana avy ao amin'ny fijery sy ny fomba nentin-drazana hahatsapa, Tremezzo dia mbola tena tsara ny fitsidihana tanàna. Tsy dia tena akaikin'ny Bellagio sady toy ny fijanonana ho an'ny maro izay te-hahita toerana mangina izay mbola manana ny Buzz ho azy. Raha ny trano fandraisam-bahiny sy raitra ao an-tanàna fiara be dia be ny mpitsidika, ny tanàna mbola manana zava mahagaga. Ny Fiangonan'i St. Maria, ohatra, dia malaza noho ny tsy mampino sarivongan'i Madonna nėra. Ankoatr'izay, misy zaridaina mahafinaritra ny fandehandehanana amin'ny alalan'ny sy hankafy ny hitan'ny olona, ​​ary feon'ny Lake Como.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Tsara tarehy Towns mba hitsidika On Lake Como” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/picturesque-towns-lake-como/ – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)